🥇 ▷ iOS 7 Wali Ma Dhameysan ✅
iOS 7 Wali Ma Dhameysan
Tan iyo markii la bilaabay nidaamka cusub ee hawlgalka mobilada ee Apple ee WWDC 2013, waxaan awoodnay inaan aragno kor u qaadista wajiga uu Jony Ive siiyay macruufka. Ka dib markii la bilaabay kii u horreeyay iOS 7 beta Horumariyaasha, isticmaaleyaal badan, ha ahaato kuwa horumaraya iyo haddii kaleba, waa kuwa iyagu ku rakibay nidaamkan cusub ee hawlgalka aaladooda. Apple.
Falcelinta ka dhexeysa isticmaaleyaashu waxay ahayd xoogaa laba-cirifood ah, halka qaar ka mid ah adeegsadayaashu ay jecel yihiin muuqaallada cusub ee soo cusbooneysiiyay ee macruufka 7 iyo astaamaha cusub ee ay keenaan, kuwa kale way neceb yihiin naqshadeynta macruufka cusub waxayna tixgeliyaan suurtagalnimada iibsashada aaladda cusub ee Android.
Jim Dalrymple wuxuu xaqiijinayaa in macruufka 7 uusan laheyn dhameystirka guud
Thanks to iPhoneHacks waxaan ogaanay in mid ka mid ah dadka ugu dhow ee qorayaasha wax u qora ee AppleJim Dalrymple uu sheegtey in kan cusub yahay iOS 7 si dhammeystiran uma dhammaan iyo in illaa laga gaadhayo nooca ugu dambeeya ee Oktoobar ay ka heli karto isbeddelada ku jira muuqaalkeeda.
Sida aan ka aqrin karno bartiisa, soosaarayaasha mas’uulka ka ah macruufka 7 ma aysan dhameystirin shaqadooda loogu talagalay WWDC 2013 sidaa darteed waxay ku qasbanaadeen inay diyaarsadaan nooc deggan oo ay ku muujiyaan furaha, iyada oo aan wali la dhammeynin. Taas macnaheedu waa inaan weli arki karnaa isbeddelo badan oo ku jira macruufka cusub ee sharadka soo socda ama nooca Dahab dahab ah.
Dhanka kale, Dalrymple wuxuu qabaa in beta uu yahay iOS 7 loo sii daayay soo-saareyaasha ayaa iyaga loogu talagalay, maaha mid u gaar ah dadweynaha. Taasi waa, beta-ka wuxuu u adeegaa soosaarayaasha sidii ay ula qabsan lahaayeen codsiyadooda barnaamijka cusub ee iOS kahor bilaabashadeeda ugu dambaysa bisha Oktoobar.
Xaqiiqdii, Apple Wuxuu siiyay wajiga wanaagsan kor u qaadista macruurtiisa cusub mana ahan wax la yaab leh kahor isbedal weyn, wali si buuxda looma cadeyn. iOS 7. Marka waa inaan sugnaa oo aan u ogolaano soosaarayaasha Apple Inay dhameeyaan shaqadaada.
Haddii aad xiisaynayso inaad siiso macruufka 7 ee fursadda, halkan waa tababbar halkaas oo aan ku tusi karno si talaabo talaabo ah sida loogu rakibo noocaan cusub aaladdaada. Xusuusnow haddii aad isticmaaleyso isbaarasho, marka aad u cusbooneysiiso macruufka 7 aadna rabto inaad ku laabato macruufka 6, waa inaad ku sameysaa nooca ugu dambeeyay ee macruufka, kaas oo aysan laheyn aalad ay ku fuliso jailbreak.